AllNdị egwuregwu bọọlụ na BeljọmNdị egwuregwu bọọlụ CroatianNdị egwuregwu bọọlụ DanishNdị egwuregwu bọọlụ DutchNdị egwuregwu bọọlụ FranceNdị egwuregwu bọọlụ GermanNdị egwuregwu bọọlụ ItaliantaliNdị egwuregwu bọọlụ PortugueseNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka Andy Cole Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Classic Footballer onye amara aha ya nke ọma; 'Andy'. Ihe Nlereanya Andy Cole na-akọ akụkọ ya na akụkọ na-adịghị mma akụkọ eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha ahụ na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ, ndụ mmekọrịta na ndị ọzọ na-ewepụ ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara maka mmekọrịta ya na Dwight Yorke ma ọ bụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ ya bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Andy Cole Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ndụ mbido
Andrew Alexander Cole mụrụ na 15th nke October, 1971 na Nottingham, United Kingdom. N'ihe gbasara ndụ ezinụlọ ya, a mụrụ Libra nke a mụrụ ụmụ amaala ama na Mbụ Lincoln Cole. Ndị mụrụ ya kwagara na UK site na Jamaica na 1957 wee rụọ ọrụ dị ka onye na-egwupụta ọkụ na Gedling, Nottinghamshire, site na 1965 ruo 1987.
Andy Cole toro na Nottingham ma malite ọrụ ya dị ka onye ntorobịa nke Arsenal mgbe ọ kwụsịrị akwụkwọ na 1988. Edere ya aka dị ka onye ọrụ ọkpụkpọ oge otu afọ mgbe e mesịrị, mana ọ bụ naanị otu ndị otu agbụrụ ka Arsenal na-anọchite anya Sheffield United.
A na-ere Cole na Division Bristol City nke abụọ, mgbe ahụ Newcastle United, tupu a zụta ya site na Man U maka £ 7 nde.
Andy Cole: Ịbanye maka Mmadụ U
Mgbe ya na Manchester United bịarutere, Cole kpebiri ịgbanwe aha ya site na 'Andrew ka Andy'. Gị, oge mbụ ya na Manchester United bụ ihe siri ike, dị ka nlọghachi Eric Cantona hụrụ ya ka ọ na-ekpuchi dị ka onye na-eti egbu. Ọ bụ nanị mgbe Cantona lara ezumike nká maka oge 1997-98 nke Cole ji nwee ike nwetaghachi ọganihu ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Andy Cole Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Cole lụrụ di na nwunye ogologo oge ya bụ Shirley Dewar na July 2002. Nwa ha nwoke, Devante, bụkwa onye ọkachamara n'ịga n'ihu; ọ sonyeere Fleetwood Town na 2016.
Na 2008, ndị uweojii jụrụ Cole mgbe a kpọsịrị ya na nwunye ya na Alderley Edge, Cheshire, n'ụlọ tupu a tọhapụ ya na mgbapụta.
Ọnwa isii mgbe e mesịrị, Cole, site n'aka onye uweojii na-ahụ maka iwu ya bụ Schillings, meriri mmebi megide ndị nwe ya Kwa Ụbọchị maka nkwulu banyere akwụkwọ nke ihe gbasara njide mwakpo ahụ na maka mmekpa ahụ kpatara ndị ezinụlọ ya site na akụkọ ndị dị egwu.
Andy Cole Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
Andy Cole nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Ọ bụ onye na-arụkọ ọrụ, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye amara, onye ezi uche, onye na-elekọta mmadụ.
Ajọ: Andy nwere ike ịbụ mkparị, zere esemokwu, ga-ebu iwe ma nwee ọmịiko onwe onye.
Ihe Andy Cole nwere mmasị: Mmetụta, ịdị nwayọọ, iso ndị ọzọ kerịta, n'èzí.
Ihe Andy Cole na-achọghị: Ime ihe ike, ikpe na-ezighị ezi, oké ụda olu na nkwekọrịta.
N'ozuzu, Andy nwere udo, dị mma, ma ha kpọrọ asị naanị ha. Ọ bụ onye dị njikere ime ihe ọ bụla iji zere esemokwu ma na-edebe udo mgbe ọ bụla o kwere omume.
Andy Cole Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ihe nkwụsị
Ihe nkwụsịtụ dị n'etiti Ndị Mmekọ Kasị Ukwuu nke United United United
Ntinye aka nke Dwight Yorke nyere Andy aka ịmepụta mmekọrịta dị ịrịba ama nke nwere otu aka na-agafe ma na-enye aka nke yiri ka ọ ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na otu ahụ na-agụ ihe ndị ọzọ.
Yorke na Cole nwetara ihe mgbaru ọsọ 53 n'etiti ha n'oge mbụ, United weere otu n'ime egwuregwu 36 ha malitere (na Sheffield Wednesday). A kọwawo njikọ dị n'etiti ndị mmadụ abụọ 'telepathy eerie'. Oge a na-agụnye ihe megidere Barcelona.
Mmekọrịta Dwight na Cole mere ka ha kwenye na Clive Tyldesley kọwaara ha ihe ndị ha mere. 'si n'ụwa a'.
The ụzọ egwu isi ọrụ na Man U si pụrụ iche treble nke Premier League aha, UEFA Champions League na FA Cup.
Ejikọtara ụzọ abụọ ahụ na Blackburn Rovers, ọ bụ ezie na ọ dịtụbeghị mgbe ha ruru ogo ụlọ ọrụ Manchester United ọzọ, a ga-echeta ha dị ka ndị pụrụ iche n'egwuregwu football. N'okpuru ebe a bụ vidiyo ọzọ nke telepathy ha megharịrị ka e jiri ha tụnyere òtù ụmụ nwoke nke otu onye nke 2013.
Andy Cole Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Banyere Ọkpara ya
Devante Lavon Andrew Cole mụrụ na Alderley Edge na 10 May 1995. Ọ na-ekwu na ọ bụ onye dị iche iche nke papa ya, Andy.
Andy Cole (N'aka ekpe) Devante Cole (Aka nri)
Ha abụọ na-egwu n'ihu ma na-achọ ịchọta ihe mgbaru ọsọ. Divante bụ ihe a na-ahụ maka pacy nke nwere ike igwu egwu n'egwuregwu ahụ ma ọ bụ ugbu a na-egwu egwu na flanks. Ebumnuche ya na-apụta ìhè na ọkwa FIFA dị n'okpuru ebe a.
Dị ka a hụrụ n'elu, Davante Cole bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị mma site na PlayStation FIFA Fans ndị na-egwuri egwu. Ọ dị ọnụ ala ịzụta ma na-arụpụta ihe.
Andy Cole Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Ọkpụkpụ akụrụ
N'ọnwa June 2014, Cole nwetara akụrụ akụrụ mgbe ọ kwụsịrị ịkwado akụkụ nke glomerulosclerosis.
Andy Cole: Mgbe akụrụ afọ
N'April 2017, ọ na-arụ ọrụ ịkpụ akụrụ. Nwa nwanne ya bụ Alexander bụ onye nyere onyinye ahụ.
Andy Cole Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu -Akwụkwọ Panama
Na April 2016, a kpọrọ Cole n'akwụkwọ Panama. Na Akwụkwọ Panama bụ akwụkwọ ndebanye 11.5 nde nwere nkọwa zuru ezu nke ego na onye ọka iwu-inweta ozi maka ihe karịrị 214,488 ndị na-esi n'èzí.
Akwụkwọ ndị ahụ nwere nkọwa ego nke onwe onye gbasara ndị bara ọgaranya na ndị ọrụ gọọmentị ndị e debere na nzuzo. Ihe ọmụma a gụnyere; nkọwa nke azụmahịa na iwu na-akwadoghị nke a zoro ezo ụdị aghụghọ, ịkwụsị tax (taxnsns). Dịka Andy Cole, Lionel Messi dị na akwụkwọ ndị ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Andy Cole Child Story tinyere akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.